Budata Minibus Simulator 2017 APK maka Android
Budata Minibus Simulator 2017
Budata Minibus Simulator 2017,
Minibus Simulator 2017 bụ egwuregwu minibus ị nwere ike ịmasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ahụmịhe ịnya ụgbọ ala nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka gị.
Anyị na -anwa ịkpata ego site na iji nkà ịnya ụgbọ ala anyị na Minibus Simulator 2017, egwuregwu minibus ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ekwentị gị na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo. Anyị na -anọchi onye ọkwọ ụgbọ ala nime egwuregwu, ihe anyị kwesịrị ime mgbe anyị na -anya ụgbọ ala nobodo bụ ịga na nkwụsị na iburu ndị njem nụgbọ anyị wee buru ndị njem a ebe ha chọrọ ịbịarute nime oge akọwapụtara.
Anyị na -anya ụgbọ ala obodo na Minibus Simulator 2017. Ebe ọ bụ na anyị na -asọ mpi megide oge, anyị ga -adị ngwa notu aka wee lebara okporo ụzọ anya. Anyị nwere ike nweta ego ma ọ bụrụ na anyị adaa ndị njem na nkwụsị ebe ha ga -apụ noge. Na Minibus Simulator 2017, anyị nwere ike iji ego anyị nwetara mepee obere ụgbọ ala.
Enwere ụdị obere ụgbọ ala iri na atọ dị na Minibus Simulator 2017. Negwuregwu ahụ, anyị nwere ike ịnyagharị okirikiri ehihie na abalị, anyị nwekwara ike ịpụ nobodo.
Minibus Simulator 2017 Ụdịdị